Sweden oo si rasmi ah u aqoonsatay Falastiin | Somaliska
Dowlada Sweden ayaa maanta si rasmi ah u gaadhay go’aanka ay ku aqoonsanayso dowlada Falastiin, iyadoo noqonaysa wadanka ugu horeeya ee galbeedka Yurub ee aqoonsada Falastiin. Sweden ayaa noqonaysa wadanka 135 ee aqoonsaday dowladnimada Falastiin.
Wasiirka arimaha dibada Sweden Margot Wallström ayaa sheegtay in go’aankaan uu taageero u yahay in ay Falastiin iyo Israel gaaraan heshiis nabadeed iyagoo ah labo wadan oo siman. Waxay intaas ku dartay in Sweden ay la daahday go’aankaan oo mar hore ay ahayd in la aqoonsado Falastiin.
Aqoonsiga Falastiin ee Sweden ayaa durbadiiba soo jiitay cambaareynta Israel, iyadoo wasiirka arimaha dibada Israel uu Sweden u sheegay in “xaalada Falastiin ay ka adagtahay aqalka IKEA oo laysku xirayo”. Margot Wallström ayaa ugu jawaabtay in ay cambaareynta Israel iyo maraykanka la filayay balse Sweden ay go’aan ku gaadhay in la gaaray xiligii la aqoonsan lahaa Falastiin.
Go’aanka dowlada Sweden ayaa la filayaa in uu wadada u furo in wadamada kale ee Yurub ay aqoonsadaan dowlada Falastiin. Dhinaca kale, Sweden ayaa sheegtay in ay kordhinayso taageerada dhaqaale ee ay siiso Falastiin shanta sano ee soo socota.
Waaw maansha allah ilaahay Muslinka ha u gar gaaro meel kastoo ay joogaan, Sweden aadbay ugu mahadsana tahay sida Geesinimada leh ee ay Goaankooda u meel mariyeen kuna aqoonsadeen Falastiin, ilaahay Gaal iyo Muslinba ha inoo sakhiro hadaan nahay Muslimiin.
WAX WEEYB KAMA SOO NAASCADAA NAAYAAN WAXAABA MACQUUL AH INEEY SIYAASADEEDA ISKA DHAAWACDO, WAXAAN ULA DANLEEHAY SWED SIYASAD AHAAN USA,, AY KU XIRANTAHAY WAXBARASHO,, SHAQO MM MANA OGOLO SIDA MUUQATO MARKA EEDO MARGOT WAXAA U FIICNEED INAY LATASHADTO BARACK HUSSEN UBAMA KAHOR INTAYSAN SOO SHEEGIN ARINTAAN,,,,,,,